what, when, why: नयाँ शहर
एउटा मानिस नयाँ शहरमा घुम्न गएछ । शहरको बिचमा पुगे पछि उसलाई पिसाब लागेछ । पिसाब फेर्ने सौचालय नदेखेर उसलाई साह्रै आपत परेछ । उसले केही पर एउटा बालक लाई देखेछ र त्यहा गएर बालक लाई सोधेछ ।
मानिस : बाबु तिम्रो घर यही हो ?
बालक : हो
मानिस : तिमीलाई पिसाब फेर्ने ठाउँ कहाँ छ थाहा छ ?
बालक : त्यतीपनि किन थाहा नहुनु नि
मानिस : भन त त्यसो भए कहाँ छ ?
(बालकले कट्टु फुकाल्यो र देखाउदै भन्यो)
बालक : ल हेर्नुस् यही हो पिसाब फेर्ने ठाउँ ...